Kobo Libra 2၊ အလယ်အလတ်တန်းစား [Analysis] | eReaders အားလုံး
Kobo Libra 2၊ အလယ်အလတ်တန်းစား [သုံးသပ်ချက်]
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | | စာဖတ်သူများ
Kobo သည် eReader ပတ်၀န်းကျင်အတွင်းမှ အခြားရွေးချယ်စရာများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး TodoeReaders ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးသပ်ချက်ဇယားတွင် ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးထည့်သွင်းမှုများကို မပျက်မကွက် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် အခြားအရာများစွာအတွက်၊ သုံးစွဲသူများစွာတောင်းဆိုနေသည့် ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်ဖြင့် အလယ်အလတ်တန်းစား၏အုတ်မြစ်ချမည့် Kobo Libra2အသစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှာဖွေတွေ့ရှိစေလိုပါသည်။
သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် Bluetooth နှင့် ၎င်း၏ အော်ဒီယိုစာအုပ်စတိုးပါရှိသော စက်ပစ္စည်း Kobo Libra2ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာထားပါသည်။ ဤ Rakuten Kobo စက်ပစ္စည်းအသစ်နှင့် အမှန်တကယ်ထိုက်တန်ပါက သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
1 ဒီဇိုင်း- Kobo ထုတ်ကုန်အဆင့်ကို စံသတ်မှတ်ခြင်း။
3 အော်ဒီယိုစာအုပ်သည် ရှေ့တွင်လုပ်ဆောင်စရာများနှင့်အတူ ရောက်လာသည်။
4 လူသိများတဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုပါ။
5 လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည့် SleepCover
7 အကောင်းအဆိုး cons
ဒီဇိုင်း- Kobo ထုတ်ကုန်အဆင့်ကို စံသတ်မှတ်ခြင်း။
ဤ Kobo Libra2၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သော ပထမဆုံးအရာမှာ အရွယ်အစားနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကွာခြားချက်များကို ကယ်တင်သည့် "အကိုကြီး" Kobo Sage နှင့် ဆင်တူသည်။ စတင်ရန်အတွက်၊ ဤ Kobo Libra2အသစ်တွင် အတိုင်းအတာများရှိသည်။ ၁၄၄.၆ x ၁၆၁.၆ x ၉ မီလီမီတာ၊ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ တိုင်းတာမှုတစ်ခုနီးပါးပါပဲ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် မကြာသေးမီက ပိုကြီးသောအရွယ်အစားကို တောင်းဆိုနေကြသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမိသော်လည်း၊ ဤအစီအမံများက သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအကြား ချိန်ခွင်လျှာကို ပိုနှစ်သက်ပါသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် အနိုင်နိုင်ဖြင့် အဖော်ဖြစ်သည်။ အလေးချိန် 215 ဂရမ်။
ရှုထောင့်: 144,6 x ကို 161,6 x ကို9မီလီမီတာ
အလေးချိန်: 215 ဂရမ်
Rakuten Kobo တွင် ထုံးစံအတိုင်း ကိရိယာ အခြေခံအဖြူနဲ့ အနက်ရောင်ဆိုပြီး အရောင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော အထိအတွေ့ရှိသော "နူးညံ့သော" ပလပ်စတစ်ရှိပြီး အခြားအမှတ်တံဆိပ်များ၏ မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်သော ပလတ်စတစ်များနှင့် ဝေးကွာသည်၊ တစ်ဖန် Kobo သည် နောက်ထပ်အရာတစ်ခုခုကို ပေးဆောင်လိုသော ထုတ်ကုန်များတွင် ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပြန်သည်။ ကျောဘက်တွင် အမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုနှင့် ခလုတ်များသည် ဂျီဩမေတြီကိန်းဂဏန်းများကို အတုယူကာ ကိရိယာကို အပိုချုပ်ကိုင်မှုပေးစွမ်းနိုင်သော အပေါက်များနှင့်အတူ စက်ပစ္စည်းကို လော့ခ်ချနိုင်စေမည့် ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော တစ်ခုတည်းသော အပေါက်သည် လူသိများသော USB-C ဖြစ်သည်။
Rakuten Kobo သည် ဤအလယ်အလတ်/အဆင့်မြင့် Libra2တွင် လူသိများသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို လောင်းကစားလိုသောကြောင့် တိုးလာသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူးထားသော 1 GHz ပရိုဆက်ဆာသည် single core ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအင်တာဖေ့စ်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားချက်များကို ပေါ့ပါးစွာလုပ်ဆောင်ပေးသော စက်ပစ္စည်းကို ရွှေ့ရန် လုံလောက်ပါသည် (ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူ ပူးတွဲပါရှိသော ဗီဒီယိုတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း)။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သိုလှောင်မှု 32 GB ရှိသည်၊ တစ်ဖန် Kobo သည် အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား eReader စာဖတ်သူများအတွက် ခက်ခဲသောဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး အော်ဒီယိုစာအုပ်အသစ်များအတွက် လုံလောက်သည်ထက်ပိုပါသည်။
တစ်ဦးကအဆင့်အထိ ဆက်သွယ်မှု ယခု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ဝိုင်ဖိုင် 801.1 bgn သည် ကျွန်ုပ်တို့အား 2,4 နှင့်5GHz ကွန်ရက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေမည့် မော်ဂျူးအသစ်၊ ဘလူးတုသ် မည်သည့်ဗားရှင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိနိုင်ခဲ့ပါနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ဂန္ထဝင်နှင့် စွယ်စုံသုံး ဆိပ်ကမ်းဖြစ်နေပါပြီ။ USB-C ။
Rakuten Kobo စက်ပစ္စည်းများ၏ အမှတ်အသားတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဤ Libra2သည် ရေစိမ်ခံနိုင်သည်၊ ကမ်းခြေ၊ ရေကူးကန်နှင့် ရေချိုးကန်ထဲတွင်ပင် အကြောက်အလန့်မရှိ ဖတ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် cIPX8 ကို မိနစ် 60 အထိ ရေအနက် နှစ်မီတာအထိ အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
မူရင်းပံ့ပိုးထားသော ဖိုင်ဖော်မတ် ၁၅ ခု (EPUB၊ EPUB15၊ FlePub၊ PDF၊ MOBI၊ JPEG၊ GIF၊ PNG၊ BMP၊ TIFF၊ TXT၊ HTML၊ RTF၊ CBZ၊ CBR)။ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းအတွက်၊ Kobo Audiobooks များကို အချို့နိုင်ငံများတွင် လောလောဆယ် ကန့်သတ်ထားသည်။ ယခုလောလောဆယ်တွင် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ပြင်သစ် (ကနေဒါ) ဂျာမန်၊ စပိန်၊ စပိန် (မက္ကဆီကို)၊ အီတလီ၊ ကာတာလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး)၊ ဒတ်ခ်ျ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်၊ နော်ဝေ၊ တူရကီ၊ ဂျပန်၊ ရိုးရာတရုတ်။
အော်ဒီယိုစာအုပ်သည် ရှေ့တွင်လုပ်ဆောင်စရာများနှင့်အတူ ရောက်လာသည်။
Rakuten စတိုးတွင်တည်ဆောက်ထားသော အော်ဒီယိုစာအုပ်အသစ်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းသည် လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နားကြပ်များကို ချိတ်ဆက်ရာတွင် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဘလူးတုသ်, နားကြပ်များအတွက် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးကို ခေါ်ဆိုမည့် အော်ဒီယိုစာအုပ်ကို ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်း၏အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်အတွင်း Kobo Libra2၏ ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှုအပိုင်းရှိ ဘလူးတုသ်ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းသို့ သွားပါ။
အော်ဒီယိုစာအုပ်မီနူးသည် လက်ရှိအခြေအနေအတွက် လုံလောက်ပါသည်။ အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုပါမည်-
စာအုပ်၏ ပြန်ဖွင့်နှုန်းကို မွမ်းမံပါ။
စက္ကန့် 30 ကြို/ပြန်ရစ်ပါ။
စာအုပ်နှင့် အညွှန်းအချက်အလက်များကို ရယူပါ။
သို့သျောလညျး အော်ဒီယိုစာအုပ်များကို သမားရိုးကျဗားရှင်းများနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းကို လွတ်သွားပါပြီ၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အရင်က ဖတ်ထားခဲ့တဲ့ တူညီတဲ့အချက်ကနေ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆက်နားထောင်ပြီး သူ့ရဲ့ "အသံ" ဗားရှင်းကို ချန်ထားခဲ့တဲ့ ရိုးရာစာဖတ်ခြင်းကို ပြန်လည်စတင်ဖို့ ဆိုလိုတာပါ။ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်တွင် Rakuten Kobo သည် အော်ဒီယိုစာအုပ် သို့မဟုတ် "ရိုးရာ" စာအုပ်ဖြစ်မဖြစ်ပေါ်မူတည်၍ တစ်ဦးချင်းသီးသန့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးကိုသာ ပြသထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နားကြပ်များကို အသုံးပြုရုံသာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ Kobo Libra2ကို Bluetooth ဖြင့် ပြင်ပစပီကာနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အလေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်များအတွက်၊ Kobo Libra2တွင် 7-လက်မ E Ink Carta 1200 high-definition panel ပါရှိပြီး resolution 300 x 1264 ဖြင့် တစ်လက်မလျှင် 1680 pixels အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ refresh rate သည် ဤလူသိများသောစခရင်မှ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ .
တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် အခြားဖြစ်နှင့်ပြီးသား Kobo နည်းပညာများ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ComfortLight Pro ၎င်းသည် လိုအပ်ချက်အရ စခရင်၏ တောက်ပမှုကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသည့်အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေရန် အရောင်၏နွေးထွေးမှုကိုလည်း ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်း၊ TypeGenius သည် မတူညီသောပုံစံ 12 ကျော်ဖြင့် မတူညီသောဖောင့် 50 ခုကိုပေးသည်။
အကန့်၏တောက်ပမှုသည် မမ်မိုရီနှင့်အတူဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ Kobo ၏အစိတ်အပိုင်းတွင် အညစ်အကြေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ပါဝါအတွက် သင်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ကို ပေးဆောင်ပြီး ဆယ်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့်ကုသမှုဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ: ကျွန်ုပ်တို့သည် အခက်အခဲမရှိဘဲ သုံးပတ်ကျော်ကြာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ခြစ်ထုတ်ခဲ့ပြီး၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းတွင် အားသွင်းကိရိယာ၊ USB-C ကြိုးတစ်ခုသာ မပါဝင်ပါ။
ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံနှင့် ယှဉ်သော အတွေ့အကြုံသည် လုံလောက်၏၊ စာမျက်နှာကိုလှည့်သည့်အခါ ဘေးဘက်ခလုတ်များကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင် အသုံးချတတ်သော်လည်း၊
လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည့် SleepCover
ဂျပန် origami မှတိုက်ရိုက်သောက်သော ဤအဖုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား "စာအုပ်တစ်အုပ်လို" ဖွင့်ထားသောကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသည့်အပြင် နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းပြသထားသည့် ၎င်း၏ပစ္စည်းများကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။ ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ မီးခိုးရောင် နှင့် အနက်ရောင် ဟူ၍ အရောင်လေးမျိုးဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နေရာချထားမှုသည် ရိုးရှင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား အဆုံးမဲ့ရာထူးများကို ခွင့်ပြုပေးသည်။
မင်းရဲ့ Kobo Libra2နဲ့ အဆက်မပြတ် လာလည်ရင်၊ ဒီကာဗာတွေထဲက တစ်ခုကို ရယူဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အိမ်သုံးဖို့သွားတဲ့အခါ သိမ်းထားနိုင်တယ်၊ အဆိုပါ 39,99 ယူရို ၎င်းသည်တရားဝင် Kobo စတိုးတွင်သို့မဟုတ် Fnac တွင်ကျသင့်သည်။
ဤစက်ပစ္စည်းသည် Amazon ကဲ့သို့သော အခြားအခြားရွေးချယ်စရာများထက် အနည်းငယ်မြင့်မားသော်လည်း အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကွဲပြားလျက်ရှိသည်။ Kobo Libra2၏ User Interface သည် ၎င်း၏ display နှင့် hardware များကဲ့သို့ အလွန်ကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Fnac တွင်ရော in ရော 189,99 ယူရိုမှ သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ စပိန်ရှိ Kobo ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ကောင်းမွန်သော ပြီးဆုံးမှုများနှင့် အထွေထွေပြီးဆုံးမှုများ
SleepCover အဖုံးသည် သင့်လက်အိတ်ကဲ့သို့ လိုက်ဖက်ပါသည်။
Kobo Stylus နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kobo Libra 2၊ အလယ်အလတ်တန်းစား [သုံးသပ်ချက်]
Kobo Sage၊ အော်ဒီယိုစာအုပ်များနှင့် stylus [ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း]
Kindle Paperwhite နှင့် Kindle Kids အသစ်များ၊ ဤဆောင်း ဦး ရာသီအတွက် Amazon ၏ကစားနည်း